पिआरको लोभमा नक्कली बिहे! :: हेमन्त काफ्ले :: Setopati
पिआरको लोभमा नक्कली बिहे!
सिड्नी, चैत १७
अमेरिकाको ग्रीन कार्ड भनेझैं अस्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको प्रवेशाज्ञालाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट(पिआर) भनिन्छ।
पछिल्ला दिनहरूमा अस्ट्रेलियाले आप्रवासी स्थायित्वको सवालमा कडाइ नीति ल्याउँदै गर्दा पिआरका लागि निकै कडा मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ।
पढाइभन्दा पैसा कमाउने सोच बनाएका र विश्वविद्यालय छाडेर सस्तो डिप्लोमा गर्नेका लागि अब अस्ट्रेलियाको पिआर फलामको चिउराझैं बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अस्ट्रेलिया आएर दशौं वर्ष बस्दा पनि पिआर नभएका कैयन् विद्यार्थीहरू पढाइ फेर्दै रूमलिरहेको बग्रेल्ती देख्न पाइन्छ।
यसरी अस्ट्रेलियामा स्थायित्व कठिन बन्दै गर्दा एकथरी मानिस सरकारी सुविधाको गलत प्रयोग गरेर भए पनि पिआर पाउनका लागि लालायित देखिन्छन्। अस्ट्रेलियामा बसेर यतैकी एक विदेशी युवतीलाई बिहे गरेका एक युवकले पारपाचुके गरेपछि आफ्नो पिआरको गलत प्रयोजन गर्दै नक्कली काम गर्दा नेपालमा जेल सजाय पाएका छन्।
पिआरवाला युवा दिल मगरले अस्ट्रेलियामा चिनजानमा रहेकी एक युवतीले आग्रह गरेपछि नक्कली विवाहमार्फत् पिआर दिलाउने बहानामा विवाह गर्न नेपाल पुगे। नक्कली विवाह गरेर अस्ट्रेलिया आउने र यतै म्यारिज भिसा आवेदन दिने चक्करमा उनीहरूको प्रयास जारी थियो। उनीहरूको प्रयास त्यतिबेला तुहियो जब उनीहरूको फेसबुकमा फोटो देखियो। अहिले विवाह गर्ने युवती फरार छिन् भने दिल ललितपुर प्रहरी जेलमा।
दिलको धेरै अघि नेपालमा विवाह भएको तर उनले अस्ट्रेलियामा भने आफू अविवाहित भन्दै विदेशीसँग विवाह गरेका रहेछन्। अस्ट्रेलियन श्रीमतीसँग विवाह गरेर बच्चा समेत भएपछि उनले पारपाचुके गरेर पिआर लिएको देखिन्छ।
नेपालमा रहेकी पहिली श्रीमतीले फेसबुकमा विवाहको फोटो देखेपछि ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिएपछि दिल प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्।
दिलले अस्ट्रेलियामा विवाह गरेको कसैलाई थाहा दिएका रहेनछन्।
‘बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएका कारण हामीले उनलाई पक्राउ गरेका हौं’, ललितपुर प्रहरीले भनेको छ।
यस्तै सहुलियतको गलत फाइदा लिँदै केही नेपाली समेत नक्कली विवाहको गलत धन्धामा लागेको पाइएको छ। कानुनत: यसमा कसैको उजुरी नपरिकन कारबाही गर्न मिल्दैन।
नेपालमा धेरै अघि विवाह गरे पनि दर्ता नगरेको कारण रेकर्डमा नदेखिने हुँदा उनीहरू अस्ट्रेलियन नागरिकताको गलत फाइदा लिँदै सो कार्यमा लागेको देखिन्छन्। सिड्नीमा बसोबास गर्दै आएका ५० कटेका उमेश (नाम परिवर्तन) ले हालसम्म दुई जना बिहे गरेर अस्ट्रेलिया ल्याइसकेका छन्। तिनलाई केही वर्षपछि पिआर दिलाएर डिभोर्स गर्दै उनले अस्ट्रेलियन नागरिकतालाई 'धन कमाउने' माध्यम बनाउँदै आएका छन्।
उनले विवाह गरेर ल्याएका दुवै परिवार हाल उनीसँग छैनन् र अस्ट्रेलियामा स्थापित भएर घरजम गरेर बसेका छन्।
यता आएर स्थायित्व प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिष्ठाको सवालका कारण उनीमाथि कसैको औंला उठ्न सकेको छैन।
नेपालबाट बिहे गरेर ल्याएपछि कानुनत: एक वर्षपछि पिआर हाल्न पाइने र पिआर आउन एक डेढ वर्षसँगै बस्नुपर्ने हुनाले यिनले दुई तीन वर्ष आर्थिक तथा शारीरिक शोषण समेत गर्ने अनि डिभोर्स गरीदिने उनले विवाह गरेर ल्याएकी एक महिलाले नाम नबताउने सर्तमा बताइन्।
अस्ट्रेलिया ल्याएपछि विभिन्न बहानामा पैसा असुल गर्ने नदिए विवाह रद्द गरिदिने धम्की समेत दिने गरेको ती महिलाले बताइन्।
यदि पैसाको लेनदेनमा पिआर प्राप्तिको लागि नक्कली विवाह गरेको प्रमाणित भएमा मानव ओसारपसार कानुन अनुरूप दश वर्षसम्म जेल समेत हुन सक्ने सिड्नीका कानुनविद शम्सेरसिंह थापा बताउँछन्।
‘यस्ता बदमाशीहरू हत्तपत्त देखिँदैनन् तर सतहमा आयो भने यसले नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ’, थापा बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १७, २०७८, ०८:१२:००